Latest CEO-Myanmar News!
7. လူကြီးလူညစ် ဂေါက်ပုံပြင် (၁၉)	-CEO-Myanmar
#Management	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ ဒီတစ်ပတ်မှာ အန်ကယ်ကြီးဂေါက်ကွင်းလာတော့ လူသစ်တစ်ယောက်ခေါ်လာပြီး မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ \_'\_'ဒါ ငါ့သား။ ဝေမင်းလို့ ခေါ်တယ်။ သူငယ်ငယ်တုန်းက တစ်ခါ ဂေါက်ကွင်းခေါ်သွားမိတာ ငါးပါးမှောက်ပါရော။\_'\_' အန်ကယ်ကြီးသားက စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ ပြုံးနေတယ်။ \_'\_'ဒီကောင် သူငယ်တန်းလောက်ကပေါ့။ တစ်ရက်မှာ အဖွားကြီးက ပဲခူးကို...
☞ အခြား lifestyles သတင်းများဖတ်ရန်...
6. Jelly Bunny	-CEO-Myanmar
#New Business	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ Jelly Bunny နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ မနန်းစုစုလှိုင်က အခုလို ဖြေကြားပေးထားပါတယ်။ Jelly Bunny မှာ ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေကိုအဓိကရောင်းလဲ ——————- Jelly Bunny က ဖိနပ်နဲ့ အိတ်လေးတွေ အဓိကရောင်းပါတယ်။ ဖိနပ်လေးတွေက ပိုများပါတယ်။ အိတ်လေးတွေက လူကြီးလည်း ကိုင်လို့ရသလို၊ အများစု...
5. Farnese Blue စိန်ကြီး လေလံဆွဲဝယ်ယူသွား	-CEO-Myanmar
#International News	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ Farnese Blue လို့ခေါ်တဲ့ အပြာမှိုင်းရောင်စိန်ကြီးကို ဆွစ်ဇာလန်ဖရန့်ငွေ ၆.၇ သန်းနဲ့ များမကြာမီက ဂျီနီဗာ လေလံပွဲမှာ လေလံဆွဲဝယ်ယူသွားပါတယ်။ မူလခန့်မှန်းထားတဲ့ လေလံကြေးမှာ ၃.၅ သန်းမှ ၅.၅ သန်းအထိသာ ဖြစ်တယ်။ အလေးချိန် ၆.၁၆ ကာရက်ရှိတဲ့ ဒီစိန်ကြီးဟာ ဥရောပတော်ဝင်မိသားစုတွေ အစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တဲ့ စိန်ဖြစ်...
4. ဆုတ်သာတက်သာ ဆောင်ရွက်ပါ	-CEO-Myanmar
#Management	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ ဆွန်ဇူးက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်မိန့်ကြားပါတယ် . . . ကျွန်ုပ်တို့ဟာ စစ်ပွဲကို ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေအရ ဆုတ်သာတက်သာ ဆောင်ရွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ အောင်ပွဲခံခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း လူတွေကို ပြောပြတဲ့အခါ လူတွေက သဘောမပေါက်ကြပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့စစ်ပွဲ အောင်နိုင်ခဲ့တာဟာ နည်းဗျူဟာတွေ သုံးခဲ့လို့ဆိုတာကိုတော့ လူတွေအားလုံးသ...
3. စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးတွင် အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်း	-CEO-Myanmar
#Article	(4d ago)
ဖွင့်ရန်။ ပြင်ဆင်ခြင်းအပိုင်းမှာလည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လုပ်ခဲ့တယ်။ သတင်းအချက်အလက် ဖော်ထုတ်ခြင်းအပိုင်းမှာလည်း အကျိုးကျေးဇူးရှိခဲ့တယ်လို့ ခံစားခဲ့ရတယ်။ လိုလေသေး မရှိရအောင် လက်ခံစာရင်းသွင်းခြင်းအပိုင်း သို့မဟုတ် စတင်ဝင်ရောက်ချိန်မှာလည်း ရေချိန်မီအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းအပိ...
2. Mr Erwan Luherne – CEO(CANAL+ Myanmar)	-CEO-Myanmar
#Interview	(5d ago)
ဖွင့်ရန်။ Canal+ Myanmar FG Ltd ရဲ့ CEO Mr Erwan Luherne ကို Canal + Myanmar FG ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနဲ့ လက်ရှိတာဝန်ယူထားရတဲ့တာဝန်တွေ ———————- ကျွန်တော် Canal+ Myanmar FG Ltd ရဲ့ CEO အဖြစ်တာဝန်ယ...
1. သန်းကြွယ်သူဌေးများရဲ့ အမြဲချမ်းသာအောင်နေနည်း ၁၄ ခုနဲ့ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းကောင်း ၄ ခု	-CEO-Myanmar
#Management	(6d ago)
ဖွင့်ရန်။ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကတော့ – နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဗဟုသုတရှာဖွေလေ့လာပါ။ အတတ်ပညာအသိပညာတွေ စုဆောင်းပါ။ – သင့်အတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်မယ့် ပညာရှင်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ။ – သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ပန...